Kuhle Carbide Rods Umkhiqizi kanye Factory | Toonney
Umkhiqizi weToonney Tungsten Carbide Rod anganikela ngenduku ye-tungsten carbide, izigayo zokuphela kwe-carbide, induku ye-carbide eqinisiwe, izinduku ze-carbide ezinembobo eqondile / evunguza yokupholisa, izinduku ezimise ngokuya ngemfuneko yekhasimende, izinduku ze-T ezimise okwe-carbide, ezinesinyathelo njll.
Isigaba somkhiqizo: Umkhiqizi weToonney Tungsten Carbide Rod anganikela ngenduku eqinile ye-tungsten carbide, induku ye-carbide enembobo epholisayo (imbobo eyodwa eqondile, izimbobo ezimbili eziqondile,) izimbobo ezimbili ze-carbide rod, izimbobo ezintathu ze-helical carbide rod, izinduku ezimise ngokuya ngemfuneko yekhasimende, i-carbide preforms nge igxathu, inetha kusimo esiseduze njll.
Inqubo Production: Ngokuhlanganiswa kwenhlanganisela, ukukhishwa, ukukhishwa, ukuguqulwa kokuma, i-tungsten carbide rod izokwakhiwa kuqala, futhi ekugcineni, induku ye-tungsten carbide kufanele ifakwe esithandweni se-HIP sintering (Toonney use 1Mpa, 6Mpa noma 10Mpa esintering fire to sinter the carbide induku ngokusho kwebanga elihlukile nokusetshenziswa). Umkhiqizi wenduku kaToonney tungsten carbide wenza nje induku ye-tungsten carbide njengezitebhisi lezi.
Indawo yesicelo:Ngabalingiswa bokuqina okuphezulu, amandla aphakeme, isitebhisi samakhemikhali, i-coefficient yokwanda ephansi, ukuqhutshwa kukagesi nokushisa, induku ye-sintered tungsten carbide isetshenziswa kabanzi endaweni yokwenziwa kwezimboni. Isibonelo, yenza ukubhola okuncane kusetshenziswe embonini ye-PCB. Ibha ye-Electrode ithandwa kakhulu embonini yomphakathi ebonakalayo. I-Carbide drill (ikakhulukazi i-gun drill), i-punch pin, i-T shape carbide preforms yama-blade ahlukene ngokukhethekile i-blade enesinyathelo esikhulu, i-machining yokhuni edinga i-Carbide flat bar, enye ibha ende ende ye-carbide (37 inches inches) yomshini wokugaya ukusekelwa, ama-Carbide reamers nama-blade anembobo epholisayo nawo asetshenziswa kabanzi embonini yemishini. Ngenxa yekhwalithi yayo enhle nentengo yokuncintisana, umenzi we-Toonney tungsten carbide rod uthola ukuthandwa kakhulu embonini ye-tungsten carbide rod, ngokususelwa ekuhlolweni kweminyaka, ekuthuthukiseni nasekwenzeni ulwazi, iToonney yandisa amandla ayo ezinduku ze-carbide ezikhiqiza zombili kwifomula yebanga lezinto ezibonakalayo, ikhwalithi kanye nesikali sokukhishwa kwenani. Uyemukelwa kumkhiqizi we-Toonney tungsten carbide rod ukuthola eminye imininingwane nge-tungsten carbide rod. Umkhiqizi wenduku kaToonney tungsten carbide ulapha nje ulinde wena!
Izigayo zokuphela kweCarbide: Carbide ekupheleni Mills, obizwa nangokuthi milling umsiki, uhlobo oluthile khabhayithi ahlabayo amathuluzi for Milling machining. Ifektri yeToonney carbide end mills idume ngezindawo zayo zokugaya ezisezingeni eliphezulu ze-carbide. Izigayo zokuphela kweCarbide zinamakhasi owodwa noma amaningana, lawo mabhande angazungeziswa futhi asike umsebenzi wokusebenza ngamunye ngamunye ngokulandelana nangezikhathi ezithile. Amakhabethe okuphela kwe-Carbide, akhiqizwa yifektri ye-carbide end, asetshenziswa ikakhulu emshinini wokugaya ukwenza imishini ebusweni, isinyathelo, inkatho, ukwakha ubuso nokusika indawo yokusebenza. Izinto ezihlanganisiwe ze-carbide zenza kahle lapho zisetshenziswa ekwenzeni isigayo sokuphela se-carbide. Ubulukhuni obukhulu obuphezulu, ukugqoka ukumelana nokucindezela ukumelana kwenza ukusetshenziswa kwezigayo zokuphela kwe-carbide kunwebe endaweni ebanzi ngesikhathi esifushane. Siyakwamukela efektri yeToonney carbide end mills ukuthola eminye imininingwane mayelana nezigayo zokuphela kwe-carbide. Ifektri ye-Toonney carbide end mills ilapha nje ikulindile!
Izindaba Zezibonelo: Induku ye-carbide ye-Tungsten engatholakala kuhlu lwethu olujwayelekile olujwayelekile, inganikezwa njengamasampula mahhala. Kokunye izigayo zokuphela kwe-carbide kanye nenduku ye-carbide enosimende enamakhasimende akhethekile angafuneki, izokhokhiswa. Vele, amakhasimende adinga ukukhokhela imali yokuthumela. Imvamisa, isikhathi sokuhola samasampuli sizoba phakathi kwezinsuku ezingu-7 zisebenza
Ubuncane be-oda Ubuningi:Abukho ubuncane be-oda lobuncane bezinduku ze-carbide ye-oda lokuqala lokulingwa. Kepha ku-oda lesibili, inani eliphelele lezinduku ze-carbide akufanele libe ngaphansi kuka-1000 USD.
Igama lomkhiqizo: Izinduku ze-Carbide
Inombolo imodeli: I-DIN Izintambo Zokusika
Uhlobo: Izinduku ze-Carbide
Isicelo: Amakhabethe okuphela kweCarbide, ama-drill, ama-shank, ama-reamers
UkubekezelelanaInombolo yocingo. KukaDia. + 0.15 kuye ku-0.7mm, nobude obungu- + 1 kuye ku- +2 kuya ngosayizi wosayizi.
Ukwelashwa Surface: Akunalutho, kuqhuma isihlabathi noma kupholishiwe
Usayizi: Amarange ajwayelekile avela ku-2 kuye ku-40mm, nobude obuphakathi kuka-300mm, obunye ubukhulu ngaphesheya kuzokwenziwa ngokwezifiso ngokukhethekile.
I-TU06 tungsten carbide rod: okusanhlamvu oku-Ultra-fine, ubulukhuni obuphakeme, amandla aphezulu, ilungele ukwenza i-PCB micro-drilling, micro milling cutter nezinhlobo zamathuluzi aqinile wensimbi. Re-kabusha impahla yokwenza milling umsiki zazo Dia. ingu-1.2mm nangaphezulu.
I-TF06 tungsten carbide rod: Ifanele ukusika i-aluminium ne-magnesium alloy, i-copper base alloy, i-alloy-based alloy, ipulasitiki, i-graphite, i-carbon fiber njll. Izinto ezinconyiwe zokwenza i-drill kanye ne-mill cutter ye-aluminium ne-magnesium material.
I-TU08 tungsten carbide rod: Amandla aphezulu nobulukhuni, kuhle ukwenza imishini ye-acrylic, izinto ezinconyiwe zokwenza i-PCB drill ne-drill enkulu okuyi-dia kuyo. Ingu-0.7mm nangaphezulu.
I-TU40 tungsten carbide rod: Izinto ezinconyiwe zokubhola ezivamile, isigayo sokugcina, okuhle kakhulu ukugaya nokubhoboza impahla ejwayelekile yensimbi, impunga yensimbi, insimbi yase-Austenite, kanye ne-alloy
I-TU40F i-tungsten carbide rod: Izinto ezinconyiwe zokwenza i-drill, i-milling cutter njll.
I-TU44 tungsten carbide rod: Kufanelekile ukwenza izinsimbi ezahlukahlukene zokugaya, i-reamer, ama-blade blades njll ikakhulukazi yenza okuhle kumathuluzi okusika ngejubane elikhulu ngokwesibonelo ekusikeni insimbi ecishiwe, i-aluminium alloy, i-titanium alloy njll.
I-TU25 tungsten carbide rod: Izinto zamathuluzi okusila kanye ne-drill ekwenzeni imishini yensimbi yokwelapha ukushisa, insimbi yensimbi, insimbi engagqwali.
I-TU45 tungsten carbide rod: Izinto ezinconyiwe zazo zonke izinhlobo zokuphela kokugaya, i-reamer, i-blade blade njll, isebenza kahle endaweni yokusika ukukhanya okusheshayo, efanelekile ikakhulukazi insimbi ecishiwe, i-aluminium alloy, i-titanium alloy njll.
Usimende we-carbide rod uqonde kahle, ubulukhuni obuhle kakhulu, namandla.
Umkhiqizi wenduku ka-Toonney usimende we-carbide unemishini emihle yokucindezela nokukhipha.
Izinduku zeCarbide zenziwe ngesithando somlilo sintering nomshini we-HIP ngezincazelo ezinhle kakhulu ngaphandle komgodi.
Kunezinduku ze-carbide, usimende we-carbide omisiwe, izigayo zokuphela kwe-carbide, izinduku zokugaya nezipholisiwe kunoma yikuphi ukubekezelelana.
amakhabethe okuphela kwe-carbide asetshenziselwa kakhulu izigayo zokuphela, ama-reamers, ama-drill, ama-countersinks, amathuluzi wokuqopha, ama-routers namanye amathuluzi wokujikeleza.
Ububanzi bezinto zokugaya zokuphela kwe-carbide buyehluka kusuka ku-0.3mm kuye ku-40mm.
Kukhona nosayizi abaningi abahlukahlukene bezinduku ze-carbide, usimende we-carbide rod, izigayo zokuphela kwe-carbide kwisicelo samakhasimende nokudweba.
Sithuthukise amamaki ochungechunge olulodwa wamathuluzi wokusika, phakathi kwawo, amamaki afana ne-TU90, TU40S, TU44, TU45 ancintisana kakhulu emakethe ephezulu yokwenza izinto ezinzima ukusika kanye nezinto ezinhle kakhulu. Ngezansi kwetafula lamabanga., Kanye nesicelo esinconyiwe.
Langaphambilini I-Carbide Strip
Olandelayo: Carbide Akunalutho